यस्तो छ शरीरमा भएको कालो दाग हटाउने सुत्र, जानी राखौ
सेप्टेम्बर 23, 2019 सेप्टेम्बर 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments कालो दाग, डा. राम बहादुर बोहरा, शरीर
शरीरमा भएको कालो दागको उपचार छाला रोग विशेषज्ञसंग पनि नभएको केहि मानिसको जीकिर छ । आज मैले यो रोगको सुत्र पाठक सामु पेश गर्न गइरहेको छु । अनुहारमा कालो दाग देखिएमा सुन्दरतामा खलल पुर्याउन सक्छ । यस्तो रोग एकपटक कसैलाई देखिएमा चाँडो निको नहुने केहिको दावी छ ।
यो रोगको प्रमुख कारण सिफिलिस हो भन्ने केहीको मत छ । बाबु आमाको लापरबाहीको सिकार सन्तानले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता रोग हजुरहरूको समाजमा छ भने यो उपचार गर्न लगाउनु भएमा पुण्यको काम हुनेछ । नेपाली समाजमा यस्ता रोग फाटफुट देखिने गरेको पाइन्छ ।
एकपटक मैले एक जनालाई यो सुत्र बताएको थिए केहि ठिक भएको उहाँको जिकिर थियो तर पछि उहाँ यो ठाउँ छोडेर अन्तै जानुभयो अहिले भेट हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा यस्ता अनेकौं औषधि छन् तर पहिचान र अनुभवको अभावले गर्दा प्रयोगबाट मानिस बन्चित भएका छन् । आज हामीले यस बारेमा पाठकलाई राम्रो जानकारी पस्कने छौं ।
मेहदी हाम्रो बारमा प्राय: देखिन्छ । मेहदिको पात ल्याउनुहोस् र सावुन समभाग मिलाएर लेप बनाउनुहोस् । दागमा यो लेप लगाउनु होस क्रमस यो रोग निको हुदै जानेछ । यस्ता अनेकौं रोग मेरो बाबाले यो सुत्रबाट निको बनाउनु भएको थियो । उहाँले यो सुत्र जनहितमा बाड्नु सबैको कल्याण हुनेछ भन्नु हुन्थ्यो ।
यो लेख पढ्नु हुने जो कोहिले यो औषधि बनाएर यस्ता बिरामीको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ । यसको कुनै हानीकारक प्रभाव छैन् । मानव सेवा जस्तो ठूलो सेवा केहि छैन । मानव सेवा आफूले जानेको जडिबुटीबाट गर्न सक्नु हुन्छ । यो लेखलाई सेयर गरेर हरेकको पहुँचसम्म पुराउनु हुनेछ । धन्यवाद !
← मासिक स्राव बढी भएमा धनिया र पुदिना हुन् अचूक औषधी
हैजाको उपचारमा ल्वाङको प्रयोग →
नाकमा मासु पलाउने रोग र यसको उपचार
सेप्टेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2